Nhau - Na2026, wepasi rose mweya wekuparadzanisa musika wemusika uchaona kukura kwakakura
DBMR yakawedzera mushumo mutsva unonzi "Mhepo Separation Equipment Musika", iyo iine dhata matafura ezvakaitika uye makore ekufungidzira. Aya matafura edata anomiririrwa ne "chat uye mairafu" akapararira kuburikidza neiyo peji uye zviri nyore kunzwisisa zvakadzama ongororo. Mhepo yekuparadzanisa michina musika yekutsvagisa mushumo inopa yakakosha kuongororwa yemamiriro ezvinhu emusika evanogadzira michina yekuparadzanisa mweya, kusanganisira saizi yemusika, kukura, mugove, maitiro, uye indasitiri mutengo chimiro. Kana tichitanga uyu musika wepasi rese, isu tinofanirwa kutarisa pamhando yemusika, chiyero chesangano, kuwanikwa munharaunda, rudzi rwekupedzisira-mushandisi mhando, uye kuwanikwa kwemishumo yekuparadzanisa michina yemhepo muNorth America, South America, Europe, Asia Pacific, uye Middle East uye Africa. Kukura kwemusika wekuparadzanisa michina musika unonyanya kutungamirwa nekukura kwepasirese R & D kushandisa, asi ichangoburwa COVID mamiriro uye kuderera kwehupfumi kwakachinja musika musimba musimba.
Mhepo yekuparadzanisa michina yekutsvagisa musika mushumo unopa mubayiro vatengi zvakanakisa mhedzisiro, uye mushumo unoburitswa nekushandisa nzira dzakabatana uye tekinoroji yazvino. Nerondedzero yemusika iyi, zviri nyore kumisikidza uye kukwidziridza nhanho yega yega yeindasitiri maitiro ehupenyu kutenderera, kusanganisira kutora chikamu, kutora, kuchengetedza, uye kuita mari. Chirevo chemusika chakaitisa ongororo yakawandisa yeiyo mamiriro emusika uye yakaongorora zvikamu zvakasiyana zvemusika nezvikamu zvidiki zveindasitiri. Pasina kutaura, mamwe machati akashandiswa nenzira kwayo mushumo wekuparadzanisa mhepo kupa zvokwadi nedata nenzira kwayo.
Pakati pemakwikwi makuru arikushanda mumusika wekuparadzanisa mweya, pane mashoma Air Liquide (France), Linde (Ireland), Praxair Technology Co, Ltd. (UK), Air Products Co, Ltd. (USA), Messer Group Co., Ltd. (Germany), Taiyo Nippon Sanso Corporation (Japan), Uig (USA), Enerflex Co., Ltd. (Canada), Technex, Astim (Europe), Bd | Sensors GmbH (Germany), Toro Equipment (Europe), Westech Engineering, Inc. (USA), Lenntech BV (Europe), Gulf Gases, Inc. (USA), Linde (Germany), Instrument & Supply, Inc. (United States ), Jbi Water uye Wastewater (United States), H2Flow Equipment Inc (Canada), Haba Tuotteet (United States), Eco-Tech, Inc. (United States), Rcbc Global Inc (Germany) nemamwe makambani.
Musika wepasi rose wemidziyo yekuparadzanisa mweya inotarisirwa kukura kubva pane yekutanga kukosha kukosha kweUS $ 3.74 bhiriyoni mu2018 kusvika kune inofungidzirwa kukosha kweUS $ 5.96 bhiriyoni mu2026, ine mukomboni wegore rekukura mwero we6% panguva yekufungidzira nguva ya2019-2026. Kuwedzera kwemutengo wemusika kunogona kuverengerwa kune yakanyanya kudiwa yezvigadzirwa zve photovoltaic uye nzira dzekuratidzira dzeplasma.
Kuti tinyatsonzwisisa simba rekuparadzanisa michina yemhepo yepasirese, takaongorora musika wepasi rose wekuparadzanisa mweya munzvimbo hombe dzenyika.
Iyo COVID-19 denda rakagadzira mabhodhoro mune rese indasitiri pombi, nzira dzekutengesa uye zviitiko zvekutengesa. Izvi zvaisa zvisati zvamboitika kumanikidza bhajeti kumashandisirwo ekambani nevatungamiriri vemaindasitiri. Izvi zvinowedzera kudiwa kwekuongororwa kwemukana, ruzivo rwemitengo maitiro uye zvinokwikwidza mhedzisiro. Shandisa timu yeDBMR kugadzira matsva ekutengesa uye ugare mumisika nyowani isingazivikanwe. DBMR inobatsira vatengi vayo kukura mumisika iyi isina chokwadi.